talwinsuccess-hobbyit အားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ......: March 2011
စကားအရာ အင်္ဂါ (၁၀)ဖြာ
၁ ။ ကာလ၀ါဒီ ပြောချိန် ပြောခွင့်သင့်မှ ပြောခြင်း ။
၂ ။ ဘူတ၀ါဒီ ဟုတ်မှန်သော စကားကိုသာ ပြောဆိုခြင်း ။
၃ ။ ဓမ္မ၀ါဒီ တရားနှင့်ဆက်စပ်သည်ကိုသာ ပြောဆိုခြင်း ။
၄ ။ အတ္တ၀ါဒီ အကျိုးစီးပွားနှင့် ဆက်သွယ်သည်ကိုသာ ပြောဆိုခြင်း ။
၅ ။ ပီယ၀ါဒီ ချစ်ဖွယ်သော စကားကိုသာ ပြောဆိုခြင်း ။
၆ ။ မိဟိတပုဗ္ဗဘာဏီ ပြုံးရွှင်စွာ ပြောဆိုခြင်း ။
၇ ။ မိတဘာဏီ မတိုမရှည် ချင့်ချိန်ပြောဆိုခြင်း ။
၈ ။ အတုရိတ၀ါဒီ အဆောတလျင် အရင်စလို မပြောဆိုရခြင်း ။
၉ ။ ပေါရီ မြို့  ကြီးသူ မြို့ ကြီးသားတို့ အသုံးမနှုန်း အတိုင်း ပြောဆိုခြင်း ။
၁၀။ ၀ိသဒ၀ါဒီ တိကျပြတ်သား သန့်ရှင်းသေချာစွာ ပြောဆိုခြင်း ။
Posted by talwinsuccess at 5:31 PM0comments
Making network cable
အခုတင်ပြရေးသားမယ့် အပိုင်းက အရင် မရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Networking အပိုင်း။ သိသည်ဖြစ်စေ၊ မသိသည်ဖြစ်စေ network က ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တော်တော်လေး နေရာယူလာပါပြီ။ Computer များသာမက PS II ဂိမ်းဆိုင်တွေမှာပါ Network ကို သုံးလာတာတွေ့ရပါတယ်။ (PSII နောက်ပိုင်း မော်ဒယ်တွေကို ကွန်ပျူတာဖြင့် network ချိတ်ပြီး game CD ကို HDD မှ ရယူအသုံးပြုခြင်းကြောင့် စက်ပျက်စီးမှု၊ ခွေဖိုးကုန်ကျမှုများ များစွာ သက်သာသွားစေပါတယ်။) အဲဒါကြောင့် သင်သုံးနေတဲ့ ကွန်ယက် (network) ကို ဘယ်လိုပြုလုပ်ပြီး တည်ဆောက်ထားတာလဲ ဆိုတာ သိသင့်ပါတယ်။ (မက်လုံးပေးရရင်တော့ စက် ၁၀ လုံး networking ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် အသားတင် လက်ခ တစ်သိန်းမှ တစ်သိန်းခွဲကြား ပေးရပါတယ်။) အခုအချိန်ကစပြီး အဲဒီမခဲယဉ်းလှတဲ့ နည်းပညာကို စာဖတ်သူတို့ဆီ ကျနော်မျှဝေပါ့မယ်။ level တိုင်းနားလည်အောင် တင်ပြသွားပါ့မယ်။
First step ကတော့ ဆက်သွယ်တပ်ဆင်တဲ့ကြိုး (Networking Cable) ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် …
အသုံးပြုနိုင်သော Network Cable တစ်ခု ပြုလုပ်ခြင်း
(၁) Cable Length : လက်ရှိအသုံးများတဲ့ ကွန်ပြူတာ network cable များဟာ twisted pair wire Categories5အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Cable တစ်ချောင်းကို မီတာ ၁၀၀ ထက် ပိုရှည်လို့ မရပါဘူး။
(၂) Connector : RJ 45 –4pairs (8 wires)
RJ 11 –2pairs (4 wires)
၀ါယာ ရှစ်ခုပါ RJ 45 သည် ကွန်ပြူတာ အတွက် ဖြစ်ပြီး၊ ၀ါယာ လေးခုပါ RJ 11 သည် ဖုန်းနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
Lan Cable Head & Modem Cable Head
RJ 45 for LAN & WAN , RJ 11 for Dial Up Modem
(၃) Color code : twisted pair cat5ကြိုးတွင် ၀ါယာရှစ်ခုပါဝင်ပြီး နှစ်ပင်ပူးစီ လိမ်ထားသော အတွဲလေးတွဲ ပါသည်။ အပြာဖြူကြား နှင့် အပြာတွဲ၊ လိမ္မော်ဖြူကြားနှင့် လိမ္မော်တွဲ၊ အစိမ်းဖြူကြားနှင့် အစိမ်းတွဲ၊ အညိုဖြူကြားနှင့် အညိုတွဲ တို့ဖြစ်သည်။ color code သည် network cable အတွက် အရေးကြီးသဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း မှတ်သားထားပေးပါ။
Order Of String
(အတိုကောက်အနေနဲ့ BOGBr ဟုမှတ်ပါ။ B=Blue, O=Orange, G=Green, Br=Brown ဟု အတွဲလေးတွဲ အစဉ်လိုက်ဖြစ်ပြီး၊ အဖြူကြားမှ စ၍ အရောင်ကြိုးမှာ ဆုံးတယ်။ အတွဲ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ ကို ဤနည်းဖြင့် မှတ်သားထားပါ။)
(၄) Ping assignment : အသုံးပြုနိုင်သော network cable တစ်ခုဖြစ်ရန် အတွက် connector တွင် ထည့်သွင်း စီစဉ်ရသော pin assignment နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
(က) T-568A (type A)
(ခ) T-568B (type B)
(က) Type A (T-568A) : pin assignment စီစဉ်မှုတွင် အတွဲ ၁ မှ ၄ သို့ အစဉ်လိုက် အစား အတွဲ ၃၊ ၁၊ ၄ ဟုစီပြီး၊ ၃ နှင့် ၄ ကြား ၁ ကို ခွ၍ အတွဲ ၂ ကို စီလိုက်ပါ။
Pin No. အရောင် လုပ်ဆောင်မှု
1. စိမ်းဖြူကြား (WG) ပို့ +
2. စိမ်း (G) ပို့ -
3. လိမ္မော်ဖြူကြား (WO) ယူ +
4. ပြာ (B) မသုံး
5. ပြာဖြူကြား (WB) မသုံး
6. လိမ္မော် (O) ယူ -
7. ညိုဖြူကြား (WBr) မသုံး
8. ညို (Br) မသုံး
(ခ) Type B (T-568B) : pin assignment စီစဉ်မှုသည် Type A ၏ အတွဲ ၂ နှင့် ၃ ကို နေရာပြောင်းလိုက်ရုံသာ ဖြစ်သည်။ ထပ်ရှင်းရလျှင် အတွဲ ၂၊ ၁၊ ၄ ကို စီပြီး ၂ နှင့် ၄ ကြား ၁ ကို ခွ၍ အတွဲ ၃ ကို စီလိုက်ပါ။
1. လိမ္မော်ဖြူကြား (WO) ပို့ +
2. လိမ္မော် (O) ပို့ -
3. စိမ်းဖြူကြား (WG) ယူ +
6. စိမ်း (G) ယူ -
(၅) Cable type : ကွန်ပြူတာနှင့် ဆက်စပ်အသုံးပြုရန် cable အမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိသည်။
(i) Straight-through Cable
(ii) Cross Cable
(i) Straight-through Cable အမျိုးအစားသည် pin assignment တူတူချင်း စီစဉ်ကာ connector တပ်ဆင်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထပ်ရှင်းရလျှင် cable တစ်ခု၏ ထိပ်နှစ်ဘက် စလုံးကို type A ချည်းသာ (သို့မဟုတ်) type B ချည်းသာ Straight-through Cable ဟု ခေါ်သည်။ (၎င်း cable အမျိုးအစားကို path cable ဟုလည်းခေါ်ပြီး ကွန်ပြူတာမှ hub (သို့မဟုတ်) Switch သို့ ချိတ်ဆက်ရာတွင် အသုံးပြုသည်)
(ii) Cross cable အမျိုးအစားသည် Type A နှင့် Type B ကို တစ်ဖက်စီ တပ်ဆင်ထားသော cable ပင် ဖြစ်သည်။ (crossover cable ကို hub အချင်းချင်း၊ switch အချင်းချင်း နှင့် ကွန်ပြူတာ နှစ်လုံး တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ခြင်းများတွင် အသုံးပြုသည်)
မှတ်ချက်။ ထို cable အမျိုးအစား နှစ်ခုကို ခွဲခြား သိလိုပါက cable ၏ ထိပ်နှစ်ဖက် ဖြစ်သော connector နှစ်ခုကို ယှဉ်ကြည့်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်ပါသည်။ pin စီစဉ်ထားမှု အရောင်များ တစ်ထပ်တည်း တူညီပါက Straight-through ဖြစ်ပြီး၊ မတူညီပဲ A-B ဖြစ်နေပါက cross cable ဖြစ်သည်။
(၆) Making Network Cable : ရှေ့တွင်ဖော်ပြပြီး အချက်(၅)ချက်သည် သိရှိရန်ဖြစ်ပြီး ယခု အချက်များသည် လိုက်ပါလုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များဖြစ်သည်။ တနည်းဆိုရသော် ကြိုးတစ်ချောင်း ရရန် ယခုမှပင် စတင်ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့် (၁) Cable Cutter : မိမိဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မည့် အရာနှစ်ခု၏ အကွာအဝေးအတိုင်း လိုအပ်သလောက်သာ ကြိုးကို ဖြတ်တောက်ပါ။ အမှားအယွင်း ရှိခဲ့ရင် ပြင်ဆင်ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ အနည်းငယ်တော့ ပိုဖြတ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မမေ့ဖို့က မီတာ ၁၀၀ ထက် မပိုရ။
အဆင့် (၂) Striper : Cable အစွန်းနှစ်ဖက် စလုံးကို အထဲမှာ ပါတဲ့ ၀ါယာအရောင်များ ကွဲပြားစွာ မြင်နိုင်ဖို့ အခွံနွှာ ပစ်ရပါမယ်။ တစ်လက်မခွဲခန့် အပေါ်ယံ (jacket) ကို နွှာပစ်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ အထဲမှ ၀ါယာများ မပေါက်ပြဲစေရန် ဂရုပြုပါ။ ပေါက်ပြဲ ပွန်းရှ ခဲ့ရင် ထိုနေရာမှ စ၍ ညှပ်ပစ်ပြီး နောက်သို့ ဆုတ်၍ strip ပြန်လုပ်ပါ။
အဆင့် (၃) Spread the wire : cable ကို အပေါ်ယံ jacket နွှာလိုက်ပါက twisted pair ဖြစ်သည့်အတွက် နှစ်ပင်ပူးစီ လိမ်ထားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ strip လုပ်ထားတဲ့ အရင်းမှ ကိုင်ပြီး မိမိပြုလုပ်မယ့် အမျိုးအစား (type A (or) type B) အတိုင်း ၀ါယာကြိုး အရောင်ကို စီတန်းလိုက်ပါ။ ပြီးနောက် connector အတွင်းသို့ ထည့်သွင်းရန် လက်မ၀က် ခန့်သာ ချန်ပြီး အဖျားပိုင်းကို ညှပ်ပစ်ပါ။
အဆင့် (၄) Connector အတွင်းသို့ ထည့်သွင်းခြင်း : ညှပ်ပြီးသော ၀ါယာ (၈) စကို connector ထဲသို့ ထည့်ပါ။ ၀ါယာစီတန်းမှုအတိုင်း connector တွင်း တစ်ချောင်းစီ ထည့်သွင်းကာ ထိပ်ထိ ညီအောင် ပြုလုပ်ပါ။ ၀ါယာ (၈)ချောင်းသည် connector အဆုံးတွင် ညီနေမှသာ connector အပေါ် pin နှင့် ဆက်သွယ်မှု ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ strip လုပ်ထားသည့် အရင်းသည် connector အတွင်းတွင် ရှိနေရမည်ဖြစ်ပြီး plunger နေရာထိ jacket ရောက်နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့် (၅) crimping : crimp ပြုလုပ်ခြင်းသည် network cable ပြုလုပ်ခြင်း၏ နောက်ဆုံးအဆင့် ဖြစ်ပါတယ်။ connector ခေါင်း နှင့် cable ကြိုး ချိတ်ဆက်မှု မြဲမြံအောင် crimping tools (crimper) ကို အသုံးပြု၍ ဖိညှပ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ crimper မကောင်းပါက connector ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။
Crimper ကို connector အမျိုးအစား သတ်မှတ်ပြီး ထုတ်သလို၊ အားလုံးအတွက် ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်အောင် ဘလောက်တုံး အရှင်များဖြင့်လည်း ထုတ်ပါတယ်။ (အခုနောက်ဆုံး အသုံးများတဲ့ crimper တွေမှာ cutter, striper တွေပါ သုံးနိုင်အောင် ထည့်ပေးထားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အဲလို crimper မျိုးတစ်ခုဆောင်ထားရုံနဲ့ cable လုပ်လို့ရပါပြီ)
RJ 45 connector ကို crimp လုပ်မှာဖြစ်လို့ 8 pin ဘလောက်တုံး (RJ 45 crimper) ကို ရွေးချယ်တပ်ဆင်ပါ။ connector ကို crimper အတွင်းတွင် နေရာတကျ ဖြစ်အောင် ထည့်လိုက်ပါ။ connector ကို သေချာထည့်သွင်းပြီးတာနဲ့ တချက်တည်း အဆုံးထိရောက်အောင် အားစိုက် ဖိညှစ်ပါ။ crimper တွေဟာ connector အတွက် လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေမှာပဲ သက်ရောက်မှု ရှိအောင် ပုံစံထုတ် ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် နေရာထား မှန်ကန်ရင် ပျက်စီးမှု မရှိပါဘူး။
Crimper ဖိညှစ်ခြင်းကြောင့် အားသက်ရောက်မှု ရှိသွားတဲ့ နှစ်နေရာက အောက်က ပုံအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁ မှာ pin အတွက် ဖြစ်ပြီး၊ ၂ မှာ jacket ပေါ် plunger ဖြင့် ဖိထားလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုဖိအားကြောင့် ၀ါယာ (၈) ခု ပေါ်မှ insulator ကို ဖောက်ပြီး connector ပေါ်ရှိ pin (conductor) များနှင့် တစ်သားတည်း ဖြစ်သွားပါတယ်။ strip လုပ်ထားတဲ့ ပမာဏ ရှည်နေရင် plunger ဟာ jacket ပေါ်မရောက်ပဲ ၀ါယာတွေပေါ် ရောက်နေလိမ့်မယ်။ အဲဒါဆိုရင် မြန်မြန်ပျက်တာတို့၊ error ဖြစ်တာတို့ ကြုံလိမ့်မယ်။
ဖော်ပြခဲ့ပြီး အဆင့်အားလုံး အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်ပြီးပြီဆိုရင် ဒီနည်းအတိုင်းပဲ cable နောက်တစ်ဖက်ကို connector တပ်ဆင်လိုက်ပါ။
ပြုလုပ်ပြီး cable ကောင်း/မကောင်း စမ်းသပ်ရန်အတွက် cable tester များကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Straight-through နှင့် crossover ကို LED မီးသီးများ ကြည့်ခြင်းဖြင့် ခွဲခြား သိနိုင်ပါတယ်။ (professional မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ မလိုပါဘူး။ စက်မှာတပ်ကြည့်ရင် သိနေတာပဲ)
ကေဘယ်ကြိုး ပြုလုပ်ခြင်း နဂိုးချုပ်ပါပြီ။ တဆင့်ပြီး တဆင့် ဆက်ရေးသွားပါ့မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဓူတင်္ဂါစာရ ဓမ္မသုခ ဆရာတော်ကြီး၏ မေတ္တာလမ်းညွှန်
ု၁။ ဒါနတရား ၊ပြည့်စုံငြား၊ စီးပွားဥစ္စာချမ်းသာမည်။
၂။ သရဏဂုံ ၊စိတ်ဝယ်ထုံ၊လုံခြုံအေးမြမည်။
၃။ ငါးပါးသီလ၊စောင့်ထိန်းက၊ ဘ၀ခန္ဓာ လုံခြုံမည်။
၄။ မေတ္တာတရား၊နေ့စဉ်းပွား၊စွမ်းအားပိုင်ရှင် ဖြစ်ရမည်။
၅။ စွမ်းအားပိုင်ရှင်၊ မေတ္တာရှင်၊နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းမည်။
(ကိုယ် စိတ် နှလုံး သုံးပါးလုံး မေတ္တာ သုံးပြီး အေးချမ်းကြပါစေ}
Posted by talwinsuccess at 12:13 PM0comments
(မဃဒေ၀လင်္ကာသစ် ပိုဒ် ၃၂၁-တတိယပိုင်း၊ ပုတ္တောဝါဒခန်း)
ကြီးရင့်ဇရာ၊ အိုသောခါတွင်၊ ပူဆာနောင်တ၊ ရတတ်စွ-လို့ ဆိုတဲ့အတိုင်း အသက်အရွယ် ကြီးရင့်လို့ အိုမင်းပြီ ဆိုတဲ့အခါမှာ နောင်တ ရတတ်တဲ့တရား၊ ငါငယ်ငယ်တုန်းက မလုပ်ခဲ့မိတာ မှားလေစွလို့ ပူပန်ရတတ်တဲ့ တရား ၁၀-မျိုး ရှိပါတယ်။
၁။ ငယ်စဉ်ကာလ စာပေမသင်ခဲ့မိရင်လည်း ကြီးလာတော့ မသင်ခဲ့ရကောင်းလားလို့ နောင်တ ရတတ်ပါတယ်။
၂။ ရှာနိုင်ဖွေနိုင်တုန်း အရွယ်ကောင်းတုန်းက ဥစ္စာမရှာခဲ့မိရင် အိုကြီးအိုမ ဇရာဒုဗ္ဗလ ဖြစ်ပြီဆိုတော့မှ စားစရာမရှိ၊ ၀တ်စရာ မရှိနဲ့ နောင်တတဖန် ပူပန်ရတတ်ပါတယ်။
၃။ လူနှစ်ယောက် ချစ်နေ၊ ခင်နေ၊ အဆင်ပြေနေကြတာကို သူတို့အချစ်ပျက်အောင် ကိုယ်က လုပ်ခဲ့မိရင်လည်း နောင်တတဖန် ပူပန်ရတတ်ပါတယ်။
၄။ သူများအသက်ကို သတ်မိပြန်ရင်လည်း ပူပန်ရတတ်ပါတယ်။
၅။ သူ့သားမယား ပြစ်မှားမိတဲ့လူလည်း စိတ်ဆင်းရဲရတာပါပဲ။
၆။ လှူနိုင် တန်းနိုင်တုန်းမှာ မလှူမိ၊ မတန်းမိခဲ့ရင်လည်း နောင်မှာ နောင်တ ရတတ်တာပါပဲ။
၇။ ဒါကတော့ ဒီနေရာမှာ အရေးအကြီးဆုံးပါ။
မွေးမြူ မိဘ၊ မပြုရ-တဲ့။
သြော်-ငါ့အဖေ၊ ငါ့အမေ သက်ရှိထင်ရှားရှိတုန်းလေး ဘာမှမကျွေးလိုက်နိုင်ပါလား၊ မပြုစုလိုက်ရပါလားလို့ အမေအဖေ မရှိတော့ပြီဆိုတော့မှ နောင်တရတတ်ပါတယ်။
ဒီနောင်တကတော့ ကြီးရင့်ဇရာ၊ အိုသောခါ-အထိ မစောင့်ပါဘူး။ အမေ အဖေ မရှိတာနဲ့ တပြိုင်နက် တခါတည်း ရတဲ့နောင်တမျိုးပါ။
၈။ လူကြီးသူမတွေ ပြောဆိုဆုံးမတာ နားမထောင်မိခဲ့ရင်လည်း ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ တပြိုင်နက် နောင်တရတာပါပဲ။
၉။ ကိုယ်သိချင်တာရှိရင် ပညာရှိတွေကို မေးရပါတယ်။ မေးရ၊ မြန်းရ၊ မှတ်သားရပါတယ်။ မမေးရင်၊ မမှတ်သားရင်၊ မနာခံရင် အကြောင်းအရာတွေကို မသိနိုင်ပါဘူး။ မသိနားမလည်တဲ့အတွက် မရှိတာထက် မသိတာခက်ပြီဆိုတော့မှ သြော်-ငါ မမေးမိလေခြင်း-လို့ နောင်တရတတ်တာပါ။
လူ့ဘ၀ရောက်လာတဲ့အခိုက် ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေကို စာရင်းချုပ်လိုက်တော့ ကောင်းတာရယ်၊ ဆိုးတာရယ်၊ ယုတ်တာရယ်၊ မြတ်တာရယ်လို့ နှစ်မျိုးပဲရှိကြပါတယ်။
ကောင်းတာ မြတ်တာ မလုပ်မိပါဘဲနှင့် ဆိုးတာ ယုတ်တာတွေကိုပဲ လုပ်နေမိရင်လည်း နောင်မှာ နောင်တ ရပြန်တာပါပဲ။
ဒါကြောင့် နောင်တတရား ဆယ်ပါးထဲမှာ ပါတဲ့ မွေးမြူမိဘ၊ မပြုရ-ဆိုတဲ့အတိုင်း မိဘတွေကို ပြုစုလုပ်ကျွေး မွေးမြူမှု၊ မပြုလိုက်ရရင် နောင်တ မရကြရအောင်
မိဘကို မသေခင်မှာ ပြုစုလုပ်ကျွေးပါ- သေမှ ငိုမနေပါနဲ့တော့၊ နောင်တ မရကြပါနဲ့တော့လို့ မင်းကွန်းတိပိဋက ဆရာတော်ကြီး သြ၀ါဒအတိုင်း သတိပေးလိုက်ရပါတယ်။
Posted by talwinsuccess at 11:47 AM0comments
ခင်ပွန်းကြီး (၁၀) ပါးကန်တော့နည်း
မှားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...မိုးညှင်းသိ င်္ဂီကျောင်းတိုက်အရှင်ဇေယျာပဏ္ဍိတ( ပိုင်းလော့ဆရာတော်)ရဲ့
ခင်ပွန်းကြီး (၁၀) ပါးကန်တော့နည်း ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာတော်အား ဤစာစုဖြင့်ရိုသေမြတ်နိုး
* ဂုဏ်ကျေးဇူး ကြီးမားကြကုန်သော မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတို့၏ အပေါ်၌
* ဂုဏ်ကျေးဇူး ကြီးမားကြကုန်သော ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ အရှင်မြတ်ကြီးတို့၏ အပေါ်၌
* ဂုဏ်ကျေးဇူး ကြီးမားကြကုန်သော အဂ္ဂသာဝက မဟာ သာဝက ရဟန္တာ အရှင်မြတ်ကြီးတို့၏အပေါ်၌
* ဂုဏ်ကျေးဇူး ကြီးမားကြကုန်သော ရဟန္တာ အရှင်မြတ်ကြီးတို့၏ အပေါ်၌
* ဂုဏ်ကျေးဇူး ကြီးမားကြကုန်သော မိခင်တို့၏ အပေါ်၌
* ဂုဏ်ကျေးဇူး ကြီးမားကြကုန်သော ဖခင်တို့၏ အပေါ်၌
* ဂုဏ်ကျေးဇူး ကြီးမားကြကုန်သော လိမ္မာစေရန် ကျိုးကြောင်းပြ၍ ဆုံးမတတ်သောဆရာသမားတို့၏အပေါ်
* ဂုဏ်ကျေးဇူး ကြီးမားကြကုန်သော သီလဂုဏ်၊ သမာဓိ ဂုဏ်၊ ပညာဂုဏ်တို့ကို ဆည်းပူးဖြည့်ကျင့်လျှက်ရှိ
...ကြကုန်သော လူပုဂ္ဂိုလ်၊ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ် ၊ အရိယာပုဂ္ဂိုလ် တို့၏ အပေါ်၌
* ဂုဏ်ကျေးဇူး ကြီးမားကြကုန်သော တရားဓမ္မတို့ကို ဟောပြောပြသ ဆုံးမတတ်သော ဆရာသမား
* ထမင်းတလုပ်၊ ရေတလုပ် စသည်ဖြင့်ပေးကမ်းချီးမြှင့်ထောက်ပံ့ဖူးသော ကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ် တို့၏ ..အပေါ်၌
ကာယကံ ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံ သုံးပါးသောကံတို့ဖြင့် ပြစ်မှားခဲ့သည်ရှိခဲ့ပါသော်ထိုအပြစ်တုိ့ကိုပျောက်ပါစေခြင်း
အကျိုးငှာ ရိုသေမြတ်နိုးလက်စုံမိုး၍ ရှိခိုးပါ၏ဘုရား........။ထိုသို့ရှိခိုး ပူဇော်ဖူးမြော်မာန်လျော့ကန်တော့ရ
သောကောင်းမှုကံစေတနာတို့ကြောင့် အလုံးစုံသော ဘေးရောဂါအန္တရာယ် အပေါင်းတို့မှကင်းဝေးပြီးလျှင်
မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောကြားတော်မှုသော သစ္စာလေးပါးမြတ်တရား ကိုကောင်းစွာသိမြင် ပြီးနိဗ္မ့ာန်သို့ဝင်နိုင်
သော ကိုယ် ဖြစ်ရပါစေသား အရှင်ဘုရား။လောကီမင်္ဂလာအဖြာဖြာတို့သည်လည်း စိတ်ကြံတိုင်း ၊တောင်းတ
တိုင်း လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ပြည့်စုံ၍ နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းရပါစေသား အရှင်ဘုရား.....လို့ပြီးရင် ငါးပါးသီလ
ခင်ပွန်းကြီး (၁၀) ပါး ပူဇော်ရခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့
၃။ ရန်သူမျိုးငါးပါးနှင့် ကင်းဝေးနိုင်ခြင်း
၅။ ပရိသတ်အလယ်၌ တင့်တယ်စွာနေနိုင်ခြင်။
၈။ စီးပွားဥစ္စာ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ခြင်း။
၉။ ဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့ သော် အကူအညီရခြင်း။
၁၀။ သားကောင်းသမီးကောင်း ရရှိနိုင်ခြင်း။
ခင်ပွန်းကြီး (၁၀) ပါးပြစ်မှားမိပါက သင့်တတ်သော ဒဏ်ဆယ်ပါးကတော့....
သွေးအန်ဖြစ်လွယ် ၊ ရောင်းဝယ်ကုန်ရှုံးခြင်း ၊ ချို့ယွင်းအင်္ဂါ
နူနာကုဌ၊ ရူးကြဖောက်ပြန်၊ မင်းဒဏ်သင့်ခဏ်း၊
ကြမ်းတမ်းစွပ်စွဲ ၊ သေကွဲ သားချင်း၊ ပျက်ခြင်းစည်းစိမ်၊
နေအိမ်မီးလောင် ၊ဒုက္ခကောင်သည် ၊ လူ့ဘောင် ဒီဌ
တွေ့ကြုံရ၍ သေကငရဲ ၊ကမ္ဘာစွဲ၏...။
ဤ ဆယ်ပါးအပြင် မဂ်ဥာဏ်၊ ဖိုဥာဏ်ကိုလည်း တားနိုင်ပါတယ်လို့အနက်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ.....
Posted by talwinsuccess at 11:57 AM0comments
Posted by talwinsuccess at 1:43 PM0comments
I , my wife and my baby
Posted by talwinsuccess at 1:24 PM0comments
Posted by talwinsuccess at 1:21 PM0comments